एस्ट्रोजेनहरू: प्रयोगहरू, साधारण ब्रान्डहरू, र सुरक्षा जानकारी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार खेलहरु कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य प्रेस समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय समाचार, कल्याण औषधि जानकारी
मुख्य >> औषधि जानकारी >> एस्ट्रोजेनहरू: प्रयोगहरू, साधारण ब्रान्डहरू, र सुरक्षा जानकारी
एस्ट्रोजेन सूची | एस्ट्रोजेनहरू के हुन्? | कसरी उनीहरू काम गर्छन् | उपयोगहरु | कसले एस्ट्रोजेन लिन सक्छ? | सुरक्षा | साइड इफेक्ट | लागत
यदि तपाइँ रजोनिवृत्ति लक्षणहरू जस्तै तातो फ्ल्यास, निद्रा गडबडी, रात्री पसिना , र योनि सुख्खा, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एस्ट्रोजेन प्रतिस्थापन, वा हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी (HRT) उल्लेख गरेको हुन सक्छ। यी असहज लक्षणहरू हुन्छन् जब शरीरमा अंडाशय र एड्रेनल ग्रंथिहरू (इन्डोक्राइन प्रणालीको अंश) ले कम एस्ट्रोजेन बनाउँछन्। त्यसोभए, एस्ट्रोजेनलाई प्रतिस्थापन गर्ने औषधीहरूले रजोनिवृत्तिको लक्षणहरू सुधार गर्न र ओस्टियोपोरोसिस रोक्न पनि सक्छ।
हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा एक्स्ट्रोजेन एक्लो, वा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन समावेश हुन सक्छ।
महिलाहरुमा गर्भाशय , हर्मोन थेरापीले दुबै एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन समावेश गर्दछ। यो किनभने एस्ट्रोजेन एक्लैले गर्भाशय भएको महिलामा एंडोमेट्रियल क्यान्सरको जोखिम बढाउँदछ।
महिलालाई हिस्टरेक्टोमी भएको छ र गर्भाशय छैन, एस्ट्रोजेनको साथ प्रोजेस्टेरोन लिन आवश्यक पर्दैन। यी महिलाहरूले एस्ट्रोजेन-मात्र उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो लेख ईस्ट्रोजेन-मात्र उत्पादनहरूमा केन्द्रित छ।
यस लेखमा, हामी बिभिन्न एस्ट्रोजेनहरू, उनीहरूको सामान्य ब्रान्ड नाम र योगनहरू, साइड इफेक्टहरू, सुरक्षा जानकारी, र अधिक सहित छलफल गर्नेछौं। एस्ट्रोजेनको बारेमा बढि जान्नको लागि तल पढ्न जारी राख्नुहोस्।
ब्रान्ड नाम (सामान्य नाम) को रूपमा उपलब्ध औसत नगद मूल्य एकलकेयर मूल्य अझै सिक
अलोरा (एस्ट्राडियोल) प्याच Pat १ches प्याचको बक्सका लागि7१।। अलोरा कुपनहरू पाउनुहोस् अलोरा विवरण
क्लाइमारा, क्लाइमारा प्रो (एस्ट्राडियोल) प्याच Pat 1 प्याचहरु को एक बक्स को लागी 1 १२१ क्लाइमारा कुपनहरू पाउनुहोस् क्लाइमारा विवरण
डेलेस्ट्रोजेन (एस्ट्राडियोल भ्यालेरेट) इंजेक्शन V २१8 एक शीशी को लागी डेलेस्ट्रोजेन कुपनहरू पाउनुहोस् डेलेस्ट्रोजेन विवरणहरू
Divigel (estradiol) मानिसहरू Ge ge० जेल प्याकेटको एक बक्सको लागि १1१ Divigel कूपन प्राप्त गर्नुहोस् Divigel विवरण
इलेस्ट्रिन (एस्ट्राडियोल) मानिसहरू एक बोतल को लागी $ 303 इलेस्ट्रिन कुपनहरू पाउनुहोस् इलेस्ट्रिन विवरण
एस्ट्रस (एस्ट्राडियोल) गोली, योनि क्रीम एक ट्यूबको लागि2२2२ एस्ट्रेस कुपनहरू पाउनुहोस् एस्ट्रेस विवरणहरू
एस्ट्रि ((एस्ट्राडियोल) योनि घुसाउनुहोस् Ring 64 for one एक औंठी को लागी स्थापना कुपनहरू पाउनुहोस् विवरणहरू स्थापना गर्दै
इम्भेक्स्सी (एस्ट्राडियोल) योनि घुसाउनुहोस् Maintenance २२ maintenance रखरखाव प्याकको लागि इम्वेक्क्सी कुपनहरू पाउनुहोस् Imvexxy विवरण
Premarin (conjugated एस्ट्रोजेन) गोली, क्रीम, इंजेक्शन एक ट्यूबको लागि555। Premarin कूपन प्राप्त गर्नुहोस् Premarin विवरण
Vagifem (estradiol) योनि ट्याब्लेटहरू Vag २ vag vag योनी ट्याब्लेटहरूको एक बक्सको लागि Vagifem कूपन प्राप्त गर्नुहोस् Vagifem विवरण
Vivelle-Dot (estradiol) प्याच Pat १ches प्याचको बक्सका लागि7१।। Vivelle-Dot कुपन प्राप्त गर्नुहोस् Vivelle- डट विवरण
Yuvafem (estradiol) योनि ट्याब्लेटहरू Vag २ vag vag योनी ट्याब्लेटहरूको एक बक्सको लागि Yuvafem कूपन प्राप्त गर्नुहोस् Yuvafem विवरण
इवामिस्ट (एस्ट्राडियोल) छाला स्प्रे
Femring (estradiol एसीटेट) योनि को औंठी
Menest (एस्ट्रोफाइड एस्ट्रोजेन) ट्याब्लेट
मेनोस्टार (एस्ट्राडियोल) प्याच (ओस्टियोपोरोसिस रोकथामको लागि मात्र प्रयोग गरिएको)
Minivelle (estradiol) प्याच
आँखा (estropipate) गोली वा योनि क्रीम
ओस्फेना (ओस्पेमिफाइन) गोली (एस्ट्रोजेन एगोनिस्ट / विरोधी)
एस्ट्रोजेनहरू के हुन्?
महिलाको दुई मुख्य यौन हार्मोन हुन्छन्: एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन। (पुरुषहरूमा एस्ट्रोजेनको थोरै मात्रा पनि हुन्छ।) एस्ट्रोजेनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो यौवन मा ल्याउँछ र मासिक चक्र को लागी जिम्मेदार छ। एस्ट्रोजेनले हड्डीहरूलाई पनि सुरक्षा दिन्छ र शरीरको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यसले असर गर्छ। एस्ट्रोजेन मुख्यत: अण्डाशयमा बनेको हुन्छ, र एड्रेनल ग्रंथिहरू थोरै मात्रामा एस्ट्रोजेन पनि उत्पादन गर्दछन्। शरीरले ईस्ट्रोजेनका तीन प्रकारहरू बनाउँदछ: एस्ट्राडियोल, इस्ट्रियोल, र एस्ट्रोन। रजोनिवृत्ति शुरू भएपछि मात्र एस्ट्रोन शरीरले उत्पादन गर्ने मात्र एस्ट्रोजेन हो।
कहिलेकाँही, इस्ट्रोजेनको स्तर धेरै उच्च हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँको शरीर धेरै बनाउन सक्छ वा तपाइँ धेरै एस्ट्रोजेन लिन सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी, जन्म नियन्त्रण गोलिहरु द्वारा (मौखिक गर्भ निरोधक)।
एस्ट्रोजेन स्तर मासिक चक्र भर मा उतार चढाव। फोलिकल, वा फोलिक्युलर चरणमा (तपाईंको अवधि र ओभुलेशन बीच), इस्ट्रोजेनको स्तर बढ्छ। स्तरहरू तपाईको मासिक धर्म चक्र (ओभुलेशन) को बिच सब भन्दा उच्च हुन्छ र तपाईको मासिक धर्म अवधिमा सबैभन्दा कम हुन्छ। रजोनिवृत्तिको क्रममा एस्ट्रोजेन स्तर कम हुन्छ।
जब महिला रजोनिवृत्ति मार्फत जान्छन्, शरीरले कम इस्ट्रोजेन बनाउँदछ, एस्ट्रोजेनको कमी सिर्जना गर्दछ। यी कम स्तरहरूले रजोनिवृत्ति लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै:
अनियमित अवधि / अवधि रोक्दछ
योनि सुख्खा र पातलो
एस्ट्रोजेन थेरापी, वा हर्मोन प्रतिस्थापन थेरापी, एस्ट्रोजेन प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। एस्ट्रोजेन प्रतिस्थापन माथिको लक्षणहरु लाई मद्दत गर्दछ।
एस्ट्रोजेनले कसरी काम गर्छ?
जब रजोनिवृत्ति हुन्छ, शरीरले कम ईस्ट्रोजेन हार्मोनहरू गर्दछ। यी तल्लो हर्मोन लेभलले तातो चमक, रात पसीना, योनी असुविधा, र निद्रा समस्या जस्ता लक्षणहरू निम्त्याउँछ। एस्ट्रोजेन औषधि एस्ट्रोजेन प्रतिस्थापन गर्दछ तपाईंको शरीरको निर्माण गर्न रोक्छ। एस्ट्रोजेनको स्तर बढाएर, रजोनिवृत्ति लक्षणहरू सुधार हुन्छन्।
एस्ट्रोजेनहरू केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
एस्ट्रोजेनको लागि सबै भन्दा सामान्य स men्केत भनेको रजोनिवृत्तिका लक्षणहरू कम गर्नु हो, जस्तै योनी सुखाइ र तातो चमक। रजोनिवृत्ति को लागी विशिष्ट संकेतहरु:
मध्यम / गम्भीर vasomotor लक्षणहरूको उपचार (जस्तै तातो फ्ल्यासहरू) रजोनिवृत्तिका कारण।
रजोनिवृत्तिका कारण भोलभोर र योनि एट्रोफीको मध्यम / गम्भीर लक्षणहरूको उपचार।यो सिफारिश गरिएको छ कि सामयिक योनी उत्पादनहरू प्रयोग गरिन्छ जब संकेत मात्र रित्तोधी को कारण वाल्भायर र / वा योनि लक्षणहरूको उपचार गर्नका लागि हुन्छ।
एस्ट्रोजेनसँग अन्य सations्केतहरू पनि छन्। विशिष्ट संकेतहरू अलग अलग औषधी र बनावट द्वारा फरक हुन्छ। एस्ट्रोजेनको लागि अन्य संकेतहरू:
एक मुक्त स्टार्टर प्याक को लागी chantix कूपन
भोलभोर र योनि atrophy को कारण दर्दनाक संभोग को उपचार
हाइपोगोनैडिज्म, क्यास्ट्रेसन, वा प्राथमिक डिम्बग्रंथि विफलताका कारण कम एस्ट्रोजेनको उपचार
स्तन क्यान्सरको उपचार (जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न) केटीहरू र मेटास्टेटिक रोग भएका पुरुषहरूमा
उन्नत एन्ड्रोजन-निर्भर प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचार (जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न)
पोस्टमेनोपसियल अस्टियोपोरोसिस रोकथाम (केवल उच्च जोखिममा छ र गैर- एस्ट्रोजेन औषधी लिन सक्दैन; व्यायाम, क्याल्सियम, र भिटामिन डीको साथ तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा एन्डोक्रिनोलॉजी विशेषज्ञ द्वारा सिफारिस गरिएको)
केही एस्ट्रोजेनहरू बांझपनको मामिलाहरूमा प्रजनन उपचारको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यी अवस्थाहरूमा, एस्ट्रोजेनहरू गर्भावस्थाको लागि गर्भाशय अस्तर तैयार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एस्ट्रोजेन पनि भागको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ संक्रमण गर्दै अन्य लागूपदार्थको साथ संयोजनमा, पुरुषबाट महिलासम्म।
जन्म नियन्त्रण गोलिहरूले एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन, वा प्रोजेस्टेरोन एक्लो हुन्छन्।
कसरी बिहान एक ह्या hang्गओभर मद्दत गर्न
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिभिन्न एस्ट्रोजेन प्रकारहरूमा चिकित्सा सल्लाह दिन सक्छन् र यदि ती मध्ये कुनै तपाईंको लागि उपयुक्त छ भने।
कसले एस्ट्रोजेन लिन सक्छ?
के पुरुषहरूले एस्ट्रोजेन लिन सक्दछन्?
केहि अवस्थाहरूमा, पुरुषहरूले केहि संकेतहरूको लागि एस्ट्रोजेन लिन सक्छ। केहि उदाहरणहरू जब पुरुषहरूले एस्ट्रोजेन उत्पादनहरू लिन सक्दछन्:
अंडकोष हटाउने (कास्ट्रेसन)
मेटास्टेटिक स्तन क्यान्सर वा उन्नत एन्ड्रोजन-निर्भर प्रोस्टेट क्यान्सरको केहि मामिलाहरूमा जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न
जब पुरुष बाट महिलामा लि gender्ग परिवर्तन हुँदैछ (अन्य औषधिहरूको साथ संयोजनमा)
के महिलाले एस्ट्रोजेन लिन सक्दछन्?
महिलाहरूले रजोनिवृत्तिका लक्षणहरूको उपचार गर्न ईस्ट्रोजेन हार्मोन थेरापी लिन सक्दछन्, र माथि उल्लिखित अन्य धेरै संकेतहरूको लागि। गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलाले एस्ट्रोजेन लिनु हुँदैन।
के बच्चाहरूले एस्ट्रोजेनहरू लिन सक्छन्?
सामान्यतया, बच्चाहरूले एस्ट्रोजेनहरू लिदैनन्। एस्ट्रोजेनहरू बच्चाहरूमा सुरक्षा र प्रभावकारिताको लागि परीक्षण गरिएको छैन। जे होस् यो बाल चिकित्सा प्रयोगको लागि संकेत गरीएको छैन, कहिलेकाँही एस्ट्रोजेन क्रीम पनि यसको लागि प्रयोग गरिन्छ अफ-लेबल कारणहरू, जस्तै Labial adhesion को उपचार गर्न। एस्ट्रोजेन थेरापी पनि ढिलो यौवनका केहि मामिलाहरूमा यौवन प्रेरित गर्न अफ-लेबल प्रयोग गरिएको छ। ठुलो मात्रामा र समयसँगै, एस्ट्रोजेनले छोटो कद पैदा गर्न सक्छ।
के वरिष्ठले एस्ट्रोजेन लिन सक्छन्?
वृद्ध वयस्क महिला र इस्ट्रोजेन औषधीहरूमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। महिलाको स्वास्थ्य पहल (डब्ल्यूआईआई) अध्ययनहरूमा, est 65 बर्ष भन्दा बढी उमेरका महिलामा स्ट्रोक र डिमेन्शियाको जोखिम बढी थियो जसले एक्स्ट्रोजन एक्लो लिनुभयो। (65 65 बर्ष भन्दा माथिका महिलाहरुमा जसले एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन लिए, त्यहाँ स्ट्रोक र स्तन क्यान्सरको बढी जोखिम थियो।)
तपाईको हेल्थकेयर प्रदायकले एस्ट्रोजेन लिनु उपयुक्त छ कि छैन र जोखिम र सुविधाहरू यसमा समावेश छ भनेर चिकित्सा सल्लाह दिन सक्छन्।
के एस्ट्रोजेनहरू सुरक्षित छन्?
तपाई खोजी गर्न सक्नुहुन्छ FDA को डाटाबेस यहाँ रिकलमा अपडेटहरू फेला पार्न।
एस्ट्रोजेनसँग एक छ बक्से चेतावनी , जुन एफडीए (संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन) द्वारा आवश्यक सबैभन्दा कडा चेतावनी हो। चेतावनी एस्ट्रोजेनको सबै सूत्रहरूमा लागू हुन्छ।
गर्भाशय भएको महिलामा एक्स्ट्रोजन एक्लो (प्रोजेस्टिन बिना) प्रयोग गर्नाले एंडोमेट्रियल क्यान्सर जोखिम बढाउन सक्छ। प्रोजेस्टिन थपेमा यो जोखिम कम हुन सक्छ, तर स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ। पोस्टमेनोपौसल महिलाहरू जो असामान्य रक्तस्राव / असामान्य मासिक धर्मको एक कुख्यातपन बाहिर निषेध गर्न परीक्षण गरिनु पर्छ।
एस्ट्रोजेन एक्लो कार्डियोभास्कुलर रोग वा डिमेन्शिया रोकथामको उपयोग गर्नु हुँदैन। महिलाको स्वास्थ्य पहल (डब्ल्यूआईआई) को अध्ययनले निर्धारित गर्‍यो कि पोस्टमेनोपासल महिलामा स्ट्रोक र डीभीटी (डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वा खुट्टामा रगत क्लोट हुने) जोखिम बढेको थियो जसले एक्स्ट्रोजेन एक्लो लिनुभयो (प्रोजेस्टिन बिना)।
उक्त अध्ययनले पोस्टमेनोपाउसल महिलाहरूमा डिस्ट्रिया हुने जोखिम पनि देखायो जसले एक्स्ट्राजन पाए।
हृदय रोग वा डिमेन्शिया रोक्नको लागि एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन प्रयोग नगर्नुहोस्। डब्ल्यूआईआई अध्ययनले डीएसटी, पीई (फुफ्फुसीय इम्बोलिजम), स्ट्रोक, र एमआई पोस्टमेनोपौसल महिलामा जो एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन लिने जोखिममा बढी जोखिमहरू भेट्टाए। अध्ययनले पोस्टमेनोपाउसल महिलाहरूमा डिमेन्शियाको उच्च जोखिम पनि फेला पारे जसले प्रोजेस्टिनको साथ एस्ट्रोजेन लिइन्।
डब्ल्यूआईआई अध्ययनले यो पनि निर्धारित गर्‍यो कि एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिनको साथ आक्रामक स्तन क्यान्सरको जोखिम बढेको छ।
एस्ट्रोजेनहरू, चाहे तिनीहरू प्रोजेस्टिनहरूसँग वा बिना नै निर्धारित गरिएको छ, न्यूनतम खुराकमा र छोटो अवधिमा तोकिनु पर्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जोखिमहरू बनाम बिभिन्न प्रकारका एस्ट्रोजेन प्रतिस्थापन थेरापीको फाइदाहरूका बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
एस्ट्रोजेनमा एलर्जीको प्रतिक्रिया दुर्लभ मामिलाहरूमा भएको छ। यदि तपाईं अंगावर, चिलाउने, सास फेर्न कठिनाई, बान्ता, वा अनुहार, ओठ, जिब्रो, हात, वा खुट्टा मा सूजन छ भने, तत्काल चिकित्सा सेवा खोज्नुहोस्। वंशानुगत एंजियोएडेमा भएका महिलाहरूमा, एस्ट्रोजेन औषधीले एन्जियोएडेमा लक्षण बिगार्न सक्छ।
कति प्रतिशत दिवालियापन चिकित्सा बिल को कारण हो
यदि तपाइँ एस्ट्रोजेनहरू लिनुहुन्न भने:
असामान्य (undiagnised) योनि रक्तस्राव छ
स्तन क्यान्सर छ (वा स्तन क्यान्सर को इतिहास)
गर्भाशय क्यान्सर (वा गर्भाशय क्यान्सर को इतिहास) छ
खुट्टा वा फोक्सोमा रगतको थक्का (वा रगतका थप्पडहरूको इतिहास) छ
एक रक्तस्राव विकार छ
हार्ट अटैक वा स्ट्रोक भएको छ
कलेजोमा समस्या छ
एस्ट्रोजेनको गम्भीर प्रतिक्रिया भएको छ
स्तनपान गर्दै छन्
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तपाईंको जोखिम र एस्ट्रोजेनको फाइदाहरूमा तपाईंको व्यक्तिगत मेडिकल ईतिहासको आधारमा सल्लाह दिन सक्छ।
के तपाइँ गर्भवती वा स्तनपानको समयमा एस्ट्रोजेन लिन सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने एस्ट्रोजेन लिनुहोस्।
के एस्ट्रोजेनहरू नियन्त्रित पदार्थहरू हुन्?
होईन, एस्ट्रोजेनहरू नियन्त्रित पदार्थहरू होइनन्।
सामान्य एस्ट्रोजेन साइड इफेक्टहरू
साइड इफेक्ट उत्पाद द्वारा फरक हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, एक योनी एस्ट्रोजेन उत्पादन को लागी जलन जस्तै अधिक स्थानीय प्रभाव हुन सक्छ, जबकि एक मौखिक ट्याब्लेट स्तन कोमलता जस्तै अधिक प्रणालीगत प्रभाव हुन सक्छ।
एस्ट्रोजेन उत्पादनहरूको साझा साइड इफेक्टहरूमा समावेश छन्:
छाती कोमलता / पीडा
फुलेको वा क्रम्पिंग
तरल धारणा / सूजन
एस्ट्रोजेन उत्पादनहरूको गम्भीर साइड इफेक्टहरू:
एन्डोमेट्रियल क्यान्सर (गर्भाशय भएका महिलाहरूमा जो एस्ट्रोजेनको साथ प्रोजेस्टिन प्रयोग गर्दैनन्)
उच्च ट्राइग्लिसराइड्स (कोलेस्ट्रोलको एक प्रकार)
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। तपाईको हेल्थकेयर प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि एस्ट्रोजेन उत्पादनहरूका साथ कुन साइड इफेक्टको आशा गर्न सकिन्छ।
एस्ट्रोजेनको लागत कति छ?
एस्ट्रोजेन-मात्र उपचार बिभिन्न प्राथमिकताहरू बिरामीको प्राथमिकता र आवश्यकता अनुरूप आउँदछ, प्याच, गोली, इन्जेक्सन, योनि क्रीम, योनी ट्याब्लेटहरू, र योनि रिingsहरू सहित। मूल्य सूत्रीकरण र ब्रान्ड वा जेनेरिक स्थितिमा आधारित हुन्छ, साथै तपाईंको बीमा कभरेजमा आधारित हुन्छ। कभरेजमा अप-टु-डेट जानकारीको लागि तपाइँ तपाइँको बीमा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को विकल्प नि: शुल्क प्रयोग गर्नु हो एकलकेयर कार्ड तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले तोकेका औषधिहरूको लागि।
बीमा बिना जेनेरिक adderall कति छ
म कति मेलाटोनिन सुत्न सक्छु
एप्पल साइडर सिरका र toenail कवक को लागी epsom नुन
के हुन्छ यदि तपाइँ धेरै एयरबोर्न लिनुहुन्छ